Okusha: I-Hay Loft - Ifulethi le-B&B eliziqukathe ngokwakho - I-Airbnb
Okusha: I-Hay Loft - Ifulethi le-B&B eliziqukathe ngokwakho
Rodsley, England, i-United Kingdom
IHay Loft eCorner Farm itholakala endaweni yaseRodsley, amamayela ayi-5 ukusuka e-Ashborne, iSango eliya eSifundazweni sasePeak. I-Alton Towers nezindlu ezimbalwa ezinomlando ziseduze, nokuhamba okuningi okuhle ngqo emnyango. Uzoyithanda i-Hay Loft ngenxa yendawo ebanzi eziqukethwe wena ngokwakho, enekhishi eligcwele, ingadi yangasese kanye nobhasikidi wasekuseni ohambisanayo onojamu owenziwe ekhaya namaqanda ezinkukhu zethu. I-Hay Loft ilungele imibhangqwana, abahambi ababodwa nabamabhizinisi.
IHay Loft itholakala kude nendlu yasepulazini enkulu enezindawo zokupaka ezinikelwe ngqo ngaphambili. Kungenwa ngengadi yayo enesango futhi ekuqaleni, njengoba negama lisho, bekuyindawo yotshani futhi ezinzile, manje esiguqulelwe ekubeni yindawo yokuhlala yezivakashi ezimele. Ngena ngehholo lokungena elincane elinamathayela. Igumbi lokulala eliphindwe kabili (isitebele sangaphambili) elinefenisha ependwe ngesandla, umatilasi we-Feather & Black kanye nezingubo zokulala ezisezingeni eliphezulu, kanye negumbi lokugezela zombili zitholakala phansi. Izitebhisi ziholela endaweni yokuhlala enkulu evulekile, yokudlela nekhishi, enezinsimbi zophahla eziveziwe kanye nephansi lezinkuni.
Indawo yokuhlala/yokudlela ifakwe usofa othokomele kanye nesihlalo se-Poang esihle kakhulu ukufunda, ifenisha ye-oki ngezikhathi ezithile, i-TV yesikrini esiyisicaba, i-Amazon fire stick, isidlali seDVD, isipikha se-Bluetooth futhi inenzuzo ye-WiFi. Kukhona itafula lokudlela le-oki eliqinile elinezihlalo zokudlela zesikhumba ezi-4. Lesi sikhala sifakwe izincwadi zokufunda, imidlalo nama-DVD azosetshenziswa izivakashi.
Ikhishi elifakwe kahle elinendawo yokusebenza ye-oki eqinile linamafasitela abheke izingadi nezindawo zasemaphandleni ngaphesheya futhi linenzuzo yazo zonke izinto zesimanje; Isiqandisi esinebhokisi lesiqandisi (libalulekile eqhweni le-G&T!), umshini wokugeza izitsha ophelele, umshini wokuwasha ohlanganisiwe / umshini wokomisa isitsha, i-fan oven, i-ceramic hob kanye ne-microwave.
Ngaphandle komnyango kuholela endaweni egandayiwe, lapho kunendlu yokulala esetshenziswa yinja yethu yezivakashi. Phezulu ezitebhisini kukhona ingadi evikelekile yenja yangasese eyenzelwe ukusetshenziswa kwethu kuphela izivakashi. Indawo yepatio inetafula elikhulu elinezihlalo, kukhona nesihlalo esijikijelwayo, iChiminea evuthayo (ukhuni olutholakalayo ongazithenga eFarmhouse) kanye neshede lendlu yasehlobo enosofa (lapho ungagcina khona ngokuphephile amabhayisikili, amakilabhu egalofu njll. ).
I-Hay Loft izuza ngokushisisa okuphakathi kwegesi kanti inhlanganisela yebhayela isho ukuthi izivakashi ngeke zishodelwe ngamanzi ashisayo.
Ngeshwa ngenxa yenani lezitebhisi / izinyathelo I-Hay Loft ayifanele noma ubani onezinkinga zokuhamba.
Inja eyodwa eziphethe kahle encane ukuya kosayizi omaphakathi yamukelekile e-The Hay Loft, (imali ekhokhwayo lapho ufika u-£5 ubusuku ngabunye nenkokhiso enkulu engu-£25 ngokuhlala). Siyacela nokho ukuthi izivakashi zingavumeli inja yazo ekamelweni noma ukuhlala phezu kwefenisha. Ikhreyithi yenja yasendlini ihlinzekwa ukuze isetshenziswe izivakashi, kanye nendlu yokulala yangaphandle. Kunesango eliphuma engadini yangasese lingena endaweni elingana kahle nezimenywa ezikhululekile ukuyisebenzisela ukuvivinya inja yazo, esikucelayo nje ukuthi abanikazi bazo sicela balawule isilwane sabo esifuywayo ngenxa yemfuyo emasimini aseduze nokuthi bayicoshe ngemva kwayo. inja bese ulahla emgqonyeni onikeziwe.
IHay Loft iwuhambo lwemizuzu eyishumi ukusuka edolobheni lezimakethe lase-Ashbourne, elinezitolo ezinkulu ezimbalwa (iSainbury, M&S kanye ne-Aldi), kanye nezitolo eziningi zokuphumula, abathengisi bezingubo abanjengoFat Face namaJoules nezitolo eziningi zekhofi / zetiye. Ngaphezulu nje kwemayela elingu-1 emzileni uzothola isitolo sempahla sasendaweni saseChurch Lane Deli, esithengisa nokudla osekulungile okumangalisayo! Sinezindawo zobumnandi ezimbili ngaphakathi kwebanga lokuhamba elilula; iNhloko ye-Saracens (1.25miles) ne-Yeaveley Arms (imayela elingu-1), zombili ezihlinzeka ngokudla okuphekwe ekhaya kwekhwalithi enhle, isevisi ye-take away kanye nepayinti ehloniphekile.
Ziningi izindawo onentshisekelo kuzo ongazivakashela eduze noma kude kancane. Chatsworth House, Alton Towers, izakhiwo eziningi zeNational Trust, Dovedale, Tissington Trail, Carsington Water ukukha nje ezimbalwa.
Ukusuka emnyango wethu izivakashi zikwazi ukufinyelela ekukhetheni okuhle kwezindlela zezinyawo zasendaweni ezifaka leyo eholela ngqo e-Osmaston Park.
Futhi sitholakala eduze kakhulu nezindawo zomshado zase-Osmaston Park, eGrangefields nase-Yeldersley Hall.
Ababungazi bakho u-David no-Sarah abahlala epulazini bayatholakala esizeni ngesikhathi sokuhlala kwakho ukuze basize ukubhekana nanoma yimiphi imibuzo noma izinkinga ezingase ziphakame.
Isivakashi singangena noma nini ngemva kuka-3pm sisebenzisa isisefo sokhiye. Sicela ukuthi izivakashi zisazise uma zihlela ukufika ngemuva kuka-9pm.
Ababungazi bakho u-David no-Sarah abahlala epulazini bayatholakala esizeni ngesikhathi sokuhlala kwakho ukuze basize ukubhekana nanoma yimiphi imibuzo noma izinkinga ezingase zipha…
Hlola ezinye izinketho ezise- Rodsley namaphethelo